Ma Taqaanaa 10-dal ee dadkooda Qaxeen Soomaaliyana Qayb Ka Tahay dadka Ka Barakay dhulkooda, - Awdinle Online
Maanta oo ah 20-ka June 2020 waxa ay ku beegan tahay maalinta loo gooni yeelay Qaxootiga adduunka, waxaana lasoo bandhigaa dhibaatooyinka dadka ka gudba soohdinta dalalkooda, kuwa ku nool xeryaha iyo sababta keentay in ay ka cararaan wadamadooda.
Qaramada Midoobay waxa ay maalintaan ugu gaar yeeshay in lagu maamuuso Qaxootiga si loosoo bandhigo dhibaatooyinka nololeed, tan sababtay in ay ka guuraan dalkooda iyo kuwa sida gaarka ah ay ula kulmaan.
Mas’uuliyiin katirsan Qaramada Midoobay waxa ay booqdaan Xeryaha ay degen yihiin dadkaan oo badi daris la ah dalalka aan xasilooneen ama ragaadisay colaadda sokeeyo iyo kuwa kale ee ka jira Dhulalkooda.
Soomaalida ayaa qayb ka ah dadka ka barakay dhulkooda, Xeryo ku yaalla Dalalka Dariska, kuwa Carabta iyo Yurub ayay degen yihiin, waxaana halkaas ku heystaa dhibaatooyin muuqda iyo kuwo qarsoon.
Warbixinta Qaramada Midoobay sanadkaan waxa ay si gaar ah u quseysaa Xaaladda nololeed ee Qaxootiga, dhimista ama yareynta Raashinka gargaar ahaanta loo siiyo iyo xaaladda cudurka Covid-19 oo sababay dhibaato daahsoon.
Sanad waliba Hay’adda waxa ay diiwaangelisaa Warbixinno la xiriira xaaladda dadka barakacay iyo kuwa Qaxootiga ah ee ka tallaabay Xuduudda dalalkooda, taasina ay ku beertay xaalad nolol cusub oo ay wajahayaan.
Marka laga soo bilaabo dhammaadkii sanadkii tagay 2019-kii, waxa ay Hay’adda Qaxootiga u qaabilsan Qaramada Midoobay UNHCR loosoo gaabiyo ay sheegtay in ay barakaceen dad gaaraya 79.5 Milyan oo ruux guud ahaan caalamka.
Arrintaas waxa ay sheegtay Hay’addu in ay walwal ku beertay xaaladda wax u qabashada dadkii horay ugu barakacay wadamadooda, culeysna ku noqdeen qoondada gargaarka loo qorsheeyay.
Sidoo kale waxaa yaraaday isu socodka wakiilada Hay’adda ee kor-joogteynta iyo qiimeynta ku sameyn jiray xeryaha ay ku sugan yihiin sabab la xiriirta cudurka dilaaga ah ee Covid-19 oo faafistiida loo hakiyay duullimaadyada Caalamiga iyo isu gudubka xuduudaha.
Hay’addu waxa ay tilmaamtay in tan burburkii Dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay diiwaangeliyeen Qaxooti kala duwan oo marba sabab gaar ah uga barakacayay dalkooda, iyada oo u mahad celisay wadamada marti geliyay.
“Waxa aan wada aragnaa isbadalka xaqiiqda ah ee ka jira dunidaan, xaaladda qaxootiga iyo dadaalka lagu garabsiinayo waa halkeeda, balse waxa soo kordhay oo ah cudurka ayaa wax waliba badalay, cidna kuma aysan fakireen in la wajahayo xaaladdaan adag oo galaafatay Nolosha dad badan” ayuu yiri Filippo Grandi.
Waa uu sii hadlay waxa uuna yiri “Dadku ma awoodaan in ay saldhigaan noloshooda caadiga ah, caqabadaha waa dhibaatada ugu weyn ee Hoygooda ka barakicisay, kaliya waxa ay u baahan yihiin dalkooda oo ay xasila kuna noolaadaan nabad iyo barwaaqo”.
Qaramada Midoobay waxa ay dul istaagtay dalalka ugu badan ee ay kasoo jeedaan Qaxootiga u diiwaangashan, waxaana ay sheegtay in ay dhibaatooyin gudaha ah wadamadooda ka dhacay ay sababtay in ay raadsanaan meelo ay u arkaan in ay ka helayaan nolol wanaagsan.
1-Syria: wadankaan waxaa ka barakacay qoysas badan oo badi ka gudbay xadka Turkiga, waxaana ay usii socdaaleen Qaaradda Yurub, kadib markii Xukuumadda Ankara ay albaabada u furtay dadkaan.
Dalkaan Syria waxaa ka barakacay dad gaaraya 6.6 Milyan oo ruux waxa ay ku kala sugan yihiin dalalka kala ah Turkiga, Lubnaan, Jordan, Ciraaq, iyo masar, intaa waxaa dheer malaayiin kale oo gudaha dalka ku dhex barakacday.
2-Afghanistan: dalkaan oo colaad sokeeye iyo mid u dhaxeysa dowlado caalami ah ragaadisay waxaa uu soo galay booska labaad ee 10-ka dal ee ugu badan Qaxootiga, dadka dalkaas ka baxsaday waxa ay ku dhaw yihiin 4 Milyan oo ruux.
Meesha ugu badan oo ay ku sugan yihiin waa dalka ay xad wadaagga yihiin ee Pakistan, gobollada soohdinta dhaca ayay u badan yihiin meelaha ay deegaansanayaan qoysaskaan qaxootiga ah.
3-Koofurta Suudaan: waa dalkii ugu dambeeyay ee helay aqoonsi madax banaani, balse hamigiisa ahaa in ay gaar isu maamulaan waxaa u badashay colaad dhexdooda ah, dadka ka barakacay ee Qaxootiga ah waa ku dhawaad 4-Milyan oo ruux.
Wadamada ay ku nool yihiin waa Uganda, Kenya, Itoobiya iyo Koongada Dimuqraadiga (DRC), waxaana halkaas ku quudiyo oo wax ku siiyo Hay’addaha Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Qaxootiga.
4-Myanmar (Burma): Kaliya waxaa ka barakacay hal qowmiyad oo isu diin ah, Rohingya waa dad muslimiin ah oo dhibbane u noqday Askar iyo qowmiyado kale, waxaana Qaxooti ahaan dalka Bangladesh oo ah halka ugu badan oo ay deegaansadeen ka gaartay dad ka badan 1 Malyan oo ruux.
5-Soomaaliya: Sanadihii lasoo dhaafay waxaa hoos u dhacay qulqulka dadka Qaxootiga Soomaalida ah ee ka tallaabaya soohdinta, taa badalkeed waxaa kordhay barakacayaasha Gudaha oo ka sababsanaya Musiibooyinka dabiiciga iyo colaadda.
Diiwaanka Qaramada Midoobay waxaa ku xusan dad gaaraya 949,000 ruux oo Qaxooti Soomaali ah, dalalka ugu badan ay ku kala nool yihiin waa Kenya, Uganda, Jabuuti iyo Yemen.
6-Suudaan: Dowladdaan waa ay xasilooneed oo ma badneen dadka ka cararaya, balse xaalka waxa uu ku xumaaday kolkii ay talada ka tuureen Madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Al-Bashiir.
724,800 ruux ayaa ka barakacday Suudaan, balse dalalka kale waxa ay kaga duwan tahay waxa ay martigeliyeen Qaxooti kasoo cararay dalkii ka go’ay 2011-kii ee Koofurta Suudaan, iyaga qudhooda waxa ay gudaha meel aan fogeyn u galeen dalkaas koofurta Suudaan.
7-Koongada Dimuqraadiga (DRC): 7887,000-ruux oo Qaxooti iyo barakacayaal ayaa dalkaas laga diiwaangeliyay, booska 7-aad waxa ay kusoo galeen dadka intaas la eg qayb kooban ay ka tallaabeen xadka halka kuwa kale ay ku dhex barakaceen gudaha.
Wadamada ugu badan oo ay gaareen Qaxootiga Congo waa Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia. Sidoo kale waxaa muwaadiniinta dalkaan ay caga dhigteen Angola, Koofurta Sudan, Koofur Africa, Kenya iyo France qaaradda Yurub ah.
8-Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe: laga soo bilaabo sanadkii 2012-kii, dalkaan waxaa ka barakacay dad badan, halka laga diiwaangeliyay qoysas Qaxooti ah oo isaga cararay wadankooda kadib markii ay la kulmeen dhibaatooyin isu biirsaday.
593,000-ruux ayaa isaga baxday Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, mar ayay gaareen hal malyan oo qof sida ku cad daraasadda xog uruurinta lagu sameeyay Qaxootiga dalkaan ka baxay.
9-Eretareeya (Eritrea): dalkaan yar waxaa kunool dad la dhibaateysan xakameynta noloshooda, waxa ay ku kala nool yihiin dalal badan oo ay tageen iyaga oo baxsad ah, maadaama aysan isu dhigmin nolosha iyo dhaqaalaha wadankaas.
500,000-ruux ayaa lagu sheegay Qaxootiga ka maqan Xukuumadda Asmara inkasta oo aan lagu caddeyn dalalka ay ku kala sugan yihiin.
10-Burundi: 343,000-ruux ayaa guud ahaan ka barakacday, Tanzania waxa ay marti gelisay (221,400), Rwanda (68,300), Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo (DRC) (43,000), Uganda (32,500), Kenya (4,900) iyo Zambia (4,500).
Isha: UNHCR / Awdinle Online
Previous articleMooshin ka dhan ah Aden Barre Ducaale oo gudbiyey Illaa 130 xildhibaan
Next articleGolaha Shacabka oo Mooshin u gudbiyay Gudoomiyaha Golaha